ဝါခေါင်မိုးနဲ့ လှမ်းလာခဲ့တော့ ‘ခတ္တာ’ရေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ၀ါခေါင်မိုးနဲ့ လှမ်းလာခဲ့တော့ ‘ခတ္တာ’ရေ	13
၀ါခေါင်မိုးနဲ့ လှမ်းလာခဲ့တော့ ‘ခတ္တာ’ရေ
Posted by အောင် မိုးသူ on Aug 20, 2015 in My Dear Diary | 13 comments
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ဧရာဝတီတိုင်းဖက် ရေကြည်မြို့ကို ရေဘေးအလှူ သွားခဲ့တုန်းက ကျတော်မေ့လျော့
နေတဲ့ ပန်းပင်လေးတစ်ပင်ကို မှတ်မှတ်ရရ ပြန်တွေ့ခဲ့တယ်။ ခတ္တာပေမယ့် သူ့ဝတ်ဆံဟာ ဆနွင်းမှုန့်အရောင်
စွန်း၊ ရနံ့ကလည်း သိပ်မမွှေးတာမို့ လူတွေ သိပ်နှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့ ခတ္တာပင်ေးလတွေကို ပြန်လည်တွေ့ခဲ့
တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာပွင့်တဲ့ ခတ္တာမို့ သူလည်း သစ္စာရှိသေးပါလားလို့ ကြည့်ရင်း တွေးမိလိုက်တယ်။
ငယ်ငယ်က နားထောင်ဖူးခဲ့တဲ့ ခိုင်ထူးရဲ့ ‘ခတ္တာ’ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲအတိုင်းပဲ ခတ္တာလေးတွေဟာ
၀ါခေါင်မိုးနဲ့အတူ အရင်ကအတိုင်း အမြဲတမ်း ပွင့်ဆဲပဲဆိုတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ လေးကျွန်းကြာခိုင်း
လီလီ တို့လို့ မလှပေမယ့် သူလည်း သူ့အလှနဲ့ သူမို့ အချိန်ခါမီ ၀ါခေါင်မိုးနဲ့ လှမ်းလာနေပါပေါ့လား
တေးဆို – ခိုင်ထူး
စိမ်းလဲ့လဲ့ မြလရိပ်သန်းxxxx အချစ်နှုတ်ခမ်း xxအနမ်းတွေဖူးပွင့်ဖို့လေ
မျှော်သူကို သံသရာကြိုး xxxရစ်နှောင်လွှမ်း ရစ်နေတုန်း
သရ၀န် ကူးလှည့်ဦးxxxx ကြင်နာမည် အသည်းရှိတဲ့အရပ် xxxxညွှန်မယ်ဆို
၀ါဆိုပန်းxx နဲ့အလွန်xx ပုန်းညက်xxx နွမ်းရက်လွန် ကြွေပြီမို့
သိဟ်ရာသီxxx ၀ါခေါင်မိုးနဲ့ xxxလှမ်းလာခဲ့တော့ ခတ္တာရေ
နှောင်းတခက်ခက်ဆူးxxx အချစ်ရိပ်ဦး စွန့်သည့်မြားxxx အသည်းမှာစူးနစ်ခဲ့လို့
သရ၀ဏ်ကူပါဦး အရင်လူဖျက်ဆီခဲ့တဲ့ xxxxxအသည်းပြင်မယ်ဆို
၀ါဆိုပန်း နဲ့အလွန် ပုန်းညက် နွမ်းရက်လွန် ကြွေပြီမို့
သိဟ်ရာသီ ၀ါခေါင်မိုးနဲ့ လှမ်းလာခဲ့တော့ xxxခတ္တာရေ
အသက်ရယ်နှင်း xxxxဆုံးဖြတ်မှ ယုံမယ်နော်
သိဟ်ရာသီ ၀ါခေါင်မိုးနဲ့ လှမ်းလာခဲ့တော့ ခတ္တာရေ
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့တွေ မဂျီး တို့ ရုံးဘက်မှာ လမ်းဘေး တလျှောက် ပွင့်တာ။
ဟိုနေ့က ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာ ပန်းတွေက မလန်းလို့သာ။
ဒါပေမဲ့ အဖြူတွေအများကြီး မြင်နေရတဲ့ ကိုယ် အတွက်တော့ လန်းဆန်းတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ် သူလည်း အလှတစ်မျိုးနဲ့ပဲ
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့ သချင်း ကြိုက်တယ်…
black chaw says: ခိုင်ထူး သီချင်း အကြောင်းရေးတာ မှတ်လို့ ၀င်ဖတ်လိုက်တာ
ခိုင်ထူး သီချင်း ဖြစ်နေတယ်…။
တေးရေး က ကိုနေ၀င်း ပါ ညီလေးရေ…။
ခတ္တာပန်းတွေကိုရော ခတ္တာ သီချင်းလေးကိုရော အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ…။
အောင် မိုးသူ says: ဒီပို့စ်တင်ပီးမှ အူးဘလက်က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခိုင်ထူးအကြောင်းရေးလာတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဒီဘက်ခေတ်မှာ သံစဉ် စာသား ဒီလိုအရသာပြည့်တာမျိုး မတွေ့မိ…
မချစ်ခဲ့ဖူးပေမယ့်… လွမ်းတယ် ခတ္တာရေ…
နန်းထိုက်တော်ဝင် မဟုတ်ပေမယ့် …
သဲမြညှာမှာ သိဟ်ရာသီတိုင်း… ဖူးပွင့်ဝေဆာပါဦးလို့….
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ် ဒီသီချင်းကို နားထောင်ပြီး စာသားရေးမှသာ စာသားတွေက တော်တော်ကောင်းမှန်းသိတယ်။
kai says: ယူတုက..ကူးတင်လိုက်ပါတယ်…
Mike says: .ဂွတ်တယ်…ခုလေးတင် ကိုဘလက်ရဲ့ ခိုင်ထူးပို့စ်ဖတ်လာတာ..ဒီမှာလည်းခိုင်ထူးပဲကိုး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သီချင်းတွေ သိပ်မသိပေမယ့် အဲဒီသီချင်းလေး ကြိုက်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 154
HMM says: အဲဒါကို ခတ္တာလို့ခေါ်မှန်းမသိဘူးကော…
အောင် မိုးသူ says: အဲ့ဒါ ခတ္တာပန်းပါ တီနှင်းရေ…
HMM says: မှားပြန်ပြီ…
တော်ကြာဦးကျောက် ပေါက်လာပီး သူ့မဟေသီ နှင်းမမ မဟုတ်ကြောင်း လာရှင်းအုံးမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.